ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ချော်လဲပြီးနောက် ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ပြီး ကုသမှုခံယူရန် လိုပါသလား - Hello Sayarwon
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ချော်လဲပြီးနောက် ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ပြီး ကုသမှုခံယူရန် လိုပါသလား
Dr. Aung Myat Thu မှ ရေးသားသည်။ 18/11/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ချော်လဲခြင်းသည် မိခင်ကို စိတ်မောစေနိုင်သော နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများစွာ ရှိနိုင်သည်။ သို့သော် လူ့ခန္ဓါကိုယ်သည် ရင်သွေးကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် ချော်လဲကျတိုင်း စိတ်ပူပန်နေရန် မလိုပေ။ မတော်တဆဖြစ်မှုလေးများကြောင့် ဖြစ်သော ဒဏ်ရာ နှင့် ဖြစ်ပွားမှုများကို ကြည့်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးဆဲ ကလေးငယ်ကို ထိခိုက်နိုင်သလား၊ မထိခိုက်နိုင်ဘူးလားဆိုသည်ကို ပြောနိုင်သည်။ ဒဏ်ရာသည် မိခင်ကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်မိမှသာလျှင် ရင်သွေးငယ်ကို ထိခိုက်မိမည်ဖြစ်သည်။
ကံကောင်းသည်မှာ ရင်သွေးကို သန်မာသော သားအိမ်နံရံ နှင့် ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများက ကာကွယ်ပေးထားသည်။ သားအိမ်ရေမွှာသည် အခုအခံအနေနှင့် လုပ်ဆောင်ပေးထားသည်။ ထို့အပြင် ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းရက်သတ္တပါတ်များတွင် သားအိမ်ကို ပို၍ လုံခြုံသော တင်ပါးဆုံရိုးခွေက ကာကွယ်ပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ချော်လဲမိသောအခါ ရင်သွေးအဆင်ပြေလျှင် စိတ်အေးအေးနေနိုင်ပါသည်။
ဆရာဝန် နှင့် ချက်ခြင်းကုသမှုခံယူသင့်သော စိုးရိမ်ဖွယ် လက္ခဏာများ။
အကယ်၍ ဆိုးရွားပြင်းထန်စွာ ချော်လဲလျှင် ဆေးရုံသို့ မဖြစ်မနေ သွားရောက်သင့်သည်။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်သူသည် ရင်သွေးကို စောင့်ကြည့်ခြင်း ၊အချင်းကွာခြင်းကို ထောက်လှမ်းခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ပေမည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်သည် ချော်လဲပြီးလျှင် ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ကြိုးစားပြီး သတိထားရမည်။
အောက်ပါတို့သည် ကျန်းမာရေးကို စစ်ေဆေးရန်အတွက် ဆေးရုံသို့သွားသင့်သော အချက်များ ဖြစ်သည်။
-ဝမ်းဗိုက်၊ သားအိမ် (သို့) တင်ပါးဆုံတွင် မခံမရပ်နိုင်အောင် ပြင်းထန်စွာ နာကျင်ခြင်း။
-မူးဝေခြင်း နှင့် ရီဝေခြင်း။
-မိန်းမကိုယ်မှ သွေးဆင်းခြင်း (သို့) ရေမွှာဆင်းခြင်း။
-သန္ဓေသား လှုပ်ရှားမှု လျော့နည်းသွားခြင်း။
ချော်လဲခြင်းမှ ဖြစ်သွားနိုင်သော သက်ရောက်မှုများ။
ချော်လဲခြင်းသည် ထိခိုက်မိသော နေရာကို အနည်း နှင့် အများ ထိခိုက်စေနိုင်သည်မှာ သိသာသည်။ အညိုအမဲစွဲခြင်း၊ ခြစ်မိခြင်းများ၏ တဒင်္ဂနာကျင်မှုများသည် ချော်လဲပြီးနောက်ပိုင်း မပြင်းထန်သော သက်ရောက်မှုများဖြစ်သည်။ သို့သော် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများကိုမူ လျှော့မတွက်ထားသင့်ပါ။
အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှောင်းပိုင်းတွင် ဖြစ်သည်။ ထိုအရာများသည် မီးဖွားခြင်း (သို့) အချိစောပြီး မွေးဖွားခြင်းများကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများသည် ချက်ခြင်းဖြစ်လေ့မရှိသော်လည်း သက်ရောက်မှုများကတော့ ဖြစ်နိုင်သည်။ ချော်လဲခြင်းသည် အခြားသော နာမကျန်းဖြစ်ခြင်း၊ ရောဂါ နှင့် ဆေးကုသမှုများ၏ လက္ခဏာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ လက်ကောက်ဝတ် နှင့် ခြေကျင်းဝတ် ဖောင်းနေခြင်းသည် ချော်လဲခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးမဟုတ်ဘဲ ဖောနေခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ပုံစံပြောင်းလာခြင်း နှင့် ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်းသည် ခန္ဓါကိုယ်တည်ချက်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီး ဟန်ချက်ထိန်းရာတွင် အခက်အခဲ ဖြစ်စေသည်။ ချော်လဲမိလျှင် ကိစ္စတော်တော်များများတွင် အရမ်းစိတ်ပူဖို့ မလိုပါ။ ရင်သွေးသည် အဆင်ပြေပါမည်။ ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ကောင်းသည်ဟုဆိုသကဲ့သို့ ချော်လဲခြင်း၏ သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်သည့်အခါ ဆရာဝန် (သို့) အထူးကု နှင့် ပြသခြင်းသည် ပို၍ စိတ်ချရသည်။
If You Fall or WitnessaFall, Do You Know What To Do http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-
aines/publications/public/injury-blessure/falls- chutes/index-eng.phpn Accessed September 08,
Do You need to seeadoctor afterafall http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/do-
you-need- to-see- a-doctor- after-a- fall Accessed September 08, 2016
I’m pregnant and recently fell. Should I be worried?. http://www.mayoclinic.org/healthy-
lifestyle/pregnancy-week- by-week/expert- answers/fall-during- pregnancy/faq-20119023
Accessed September 08, 2016
Pregnancy fears: trips and accidents http://www.madeformums.com/pregnancy/pregnancy-fears- trips-and-
accidents/29968.html Accessed September 08, 2016
Q&A What happens if I fall during pregnancy https://www.babble.com/pregnancy/belly-trauma-
during-pregnancy/ Accessed September 08, 2016
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဆီးချိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားသင့်သမျှ
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေ အသားအရေ လှစေဖို့ ဒါတွေ စားဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေ ဘာတွေ ခံစားရနိုင်လဲ။